ပြဇာတ် – Everybody Read TChen
“တကယ်ပြောတာ မင်းမှာ ထူးခြားတဲ့ သွင်ပြင်ရောင်ဝါ တွေရှိနေတယ်…..မင်းဝိညဉ်တွေ ကိုယုံလား?… ကိုယ်တော့ အဲတာတွေ သိပ်ယုံတာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် မင်းနဲ့ ကိုယ် အရင်ဘ၀တွေ က သိခဲ့ဖူးတာ ဖြစ်မယ်”
“မင်း ဂျက်ဇ် (Jazz) ဂီတ ကိုကြိုက်လား? ……. ချာလီ ပါကာ (Charlie Parker) နဲ့ …. နောက်ပြီး… ကတ်ကိုဘိန်း (Kurt Cobain) လေ …. ကိုယ်သူ့ကို အရမ်းကြိုက်တယ်….. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ….”
(Ben Weisman – Fred Wise)
« © ’59 Chappell & Co, ASCAP / Erika Publishing, ASCAP »
It must have been rainin’ the night I was born
Well I’m so I’m so afraid of tomorrow
Posted on April 11, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ပြဇာတ်11 Comments on ဘ၀ဖော် (Soul mate)